Total fitsidihana: 2.634.580
Zava-mainty Lives mainty 100% nefa maniry fanao any afrikanina Tatsimo? Iza no mahazo tombony? George Floyd amin'ny antsipiriany kokoa
I Donald Trump dia mitendry lokanga raha mandoro i Roma, toa an'i Emperor Nero ihany
Martin Vrijland op Zava-mainty Lives mainty 100% nefa maniry fanao any afrikanina Tatsimo? Iza no mahazo tombony? George Floyd amin'ny antsipiriany kokoa
Wilfred Bakker op Zava-mainty Lives mainty 100% nefa maniry fanao any afrikanina Tatsimo? Iza no mahazo tombony? George Floyd amin'ny antsipiriany kokoa
Future op Zava-mainty Lives mainty 100% nefa maniry fanao any afrikanina Tatsimo? Iza no mahazo tombony? George Floyd amin'ny antsipiriany kokoa
Chantal74 op Zava-mainty Lives mainty 100% nefa maniry fanao any afrikanina Tatsimo? Iza no mahazo tombony? George Floyd amin'ny antsipiriany kokoa
ZalmInBlik op Olona an'arivony tao amin'ny kianja Dam Square no nandoa fihetsiketsehana na natokana ho an'i George Floyd izay tsy misy mahafantatra?